YEYINTNGE(CANADA): Saturday, August 14
14 August 2010 ဒိုင်ယာရီ
14 August 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/14/20100အကြံပြုခြင်း
ရွေးကောက်ပွဲရက် ကြေညာပေမဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း လစ်ဟင်းနေဆဲ
By ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း သောကြာ, 13 သြဂုတ် 2010
ဓာတ်ပုံ ASSOCIATED PRESS ၀ါရှင်တန်ဒီစီရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန
အကြပ်ကိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
အကြပ်ကိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ရဲ့ ခွေးခြင်္သေ့ ဆိုင်းဗုဒ်
အကြပ်ကိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ နှင့် ဦးဆောင်သူများအတွက် မြန်မာပြည်က ပေးတဲ့စာ
၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း အကြောင်းလို့ ပြောလို့ရတဲ့ စာလို့ လွယ်လွယ်မှတ်ပြီး လေးလေးနက်နက် တွေးတောကြံဆ လှုပ်ရှား ပြုပြင်ကြပါလို့ လူထုတရပ်လုံးအပါအဝင် အားလုံးကို အရင်ဆုံး စကားချီးလိုက်ပါတယ်။
ဒီအသင်းဟာ စဖွဲ့စဉ် အချိန်ထဲက ကြီးးထွားအောင်ဘဲ အရင်လုပ်လာတာကို တွေ့ရမယ်။ အဲလို ကြီးထွားအောင်လည်း ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို အကြပ်ကိုင်ပြီး အသင်းဝင်ဖြစ်လာအောင် လုပ်လာတယ်။ ဒါကို ပြည်သူ လူထုတရပ်လုံး အသိပဲ ဖြစ်တယ်။ဒါတင်ပဲလား ဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ တိုင်းပြည်က ထွက်ရှိတဲ့ သယံဇာတ တွေအပါအဝင် ဂုတ်သွေးစုတ်လို့ ရသမျှတွေကို ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ ခွံ့ကျွေးနေရတာကိုလည်း သိကြမှာပါ။ အဲဒိတော့ ခု ဒီစာ ရေးတဲ့အချိန်ကစပြီး လူထုတရပ်လုံးအတွက် စတေးခံ အကောင်းဆုံး မြေသြဇာ အဖွဲ့ကြီးကနေ ဒီအသင်းကို ကြံ့ဖွံ့လို့ သရော်ခေါ်မဲ့အစား အကြပ်ကိုင် ခွံ့ကျွေးရေးလို့ ခေါ်ဖို့အတွက် အမည်ပေးကင်ပွန်းပါ တပ်ပေးလိုက်ပါပြီ။
လက်တွေ့မှာတော့ ဒီအသင်းကြီး ကြီိးထွားလာအောင် ပြည်သူတွေ တော်တော်လေး အကြပ်ကိုင် ခံလိုက်ရတယ်။ အခု ရွေးကောက်ပွဲ နီိးလာတော့ သူတိုရဲ့ မူလဇာတိစိတ်ဓါတ်က ပြန်ပေါ်လာပြီ။ ဘယ်လိုတွေ ပေါ်လာလည်း ဆိုရင် -
ပြည့်တန်ဆာမ စိတ်ဓါတ် နှင့်တူအောင် ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို ပြုလုပ်နေတဲ့ အကြပ်ကိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကြီးရဲ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ
အကြပ်ကိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်း ရဲ့ လိုအပ်တာများ မှာစားခြင်း မှတ်တမ်းပုံ
ကနေ့ နိင်ငံရေး ပါတီတွေ ဖွဲ့ခွင့်ပေးတဲ့အခါ.... မူလ တည်ထောင်စဉ်က ပြည်သူ့အတွက် အလုပ်အကြွေးပြုပါမယ် ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်တွေ မူတွေ ချပြထားတဲ့ အကြပ်ကိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းကြီးဟာ တကယ့် လက်တွေ့မှာတော့.. နေ့ချင်းညချင်း (နေ့မွေးညကြီး) အဖွဲ့ကြီး ဖြစ်လာတာ ဘယ် နာယကကြီး ( သန်းရွှေ )၊ဘယ် ဥက္ကဌကြီး(သိန်းစိန်)များ ငြင်းရဲပါသလဲ။
ကျုပ်တို့ ဒီနေ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေကို ဝန်းရံနေတာ၊ အားဖြည့်နေတာတွေဟာ ပြည်သူအတွက်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့လည်း အသိပဲဖြစ်တယ်။ ခင်ဗျားတို့လို ပြည်သူကိုတော့ မလိမ့်တပတ် မလိမ်ရဲဘူး။ မညာရဲဘူး ။ လုပ်ရင်ရဲတယ်။ ဒါလုပ်ရင် အဖမ်းခံရမယ်ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့လုပ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း ခံရဲတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်တို့ဟာ ခင်ဗျားတို့လို ပြည်သူကကျွေးသော/တိုက်သော ထမင်း၊လ္ဘက်ရည်ကို သောက်/စားပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ သစ္စာကို စောင့်သိရိုသေပါမယ်လို့ သစ္စာ မဆိုထားဘူး။ အဲလိုပဲ သစ္စာတွေ ဆိုပြီးတော့ ထမင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူလက်ကို ပြန်ကိုက်နေရတာပါလား ဆိုတာလည်း သိဖို့လိုတယ်။ နောက်တခု ဗိုလ်ချုပ်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ အစိမ်းရောင်နဲ့ တပ်မတော်ဟာ ခုလို မိန်းမကျင့် မိန်းမကြံ ကြံဖို့အတွက် ဖွဲ့ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တုန်းက ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ လူ၃၀၀ လောက်ပါတဲ့ လူအုပ် မိန်းမ ယာဉ်တန်းကို စစ်သားတွေ စစ်ဗိုလ်တွေ ရဲတွေ ပါဝင်ညွှန်ကြားပြီး ထောင်သားတွေ သူခိုးဓါးပြတွေနဲ့ ရိုက်သတ်ရဲတဲ့ အာဃ သတ္တိမျိုးကို တမလွန်က ဗိုလ်ချုပ်သာ မြင်ခွင့်ရရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်သားတွေဆိုတာ အဲဒီလို ယုတ်မာတဲ့ သတ္တိမရှိဘူး ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိမှာပါ။ အစိမ်းနုရောင်ဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသားဆိုတဲ့ သူတွေ (မျိုးဆက်သစ်/မျိုးဆက်ဟောင်း) တွေကလည်း မလုပ်ရဲကြပါဘူး။
အကြပ်ကိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမှ ခေါင်းဆောင်ဇာတ်မင်းသားများ မှ တရုပ်ကို ကြိုဆိုနေပုံ
ဒီအဖွဲ့ စဖွဲ့ကတည်းက ခေါင်းဆောင်ကိုက လူလိမ်၊ ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က....အာဏာကို မလွှဲချင်တာနဲ့ အာရုံပြောင်းရအောင်က နံပတ်တစ်။ ပြည်သူကို ပြန် သတ်ရအောင် ဗိုလ်ကျရအောင်က နံပတ်နှစ်။ ငြင်းချင်သလား.... လက်တွေ့ ပြည်သူတိုင်း ပေးဆပ်လိုက်ရ တာကတော့ ဒီအဖွဲ့ကြီး (နေ့မွေးညကြီး) ဖြစ်အောင် အမျိုးမျိုး အကြပ်ကိုင်တာ ခံရတာပါဘဲ။
နေ့မွေးညကြီး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို လေးလေးနက်နက် တွေးဆဖို့ လိုလာပါပြီ။ နေ့မွေးညကြီးဆိုတာ လောကမှာ ညဘက်ကြီးပွားတာကို ပြောတာပါ။ ညဘက်မှာ ကြီးပွားတာ ဘာလဲဆိုရင် ပြည့်တန်ဆာမတွေလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက ယနေ့ အခြေအနေ အချိန်အခါထိ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြည့်တန်ဆာခန်းတွေ အနှိပ်ခန်းတွေ ထောင်ချင်ရင် အကြပ်ကိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ နွယ်ကြရတာ လူတိုင်းအသိပါ။ ဘယ်လောက် ပေါများလာပြီလဲ ဆိုတာကိုတော့ အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ပိုလျှံနေလို့တောင် နယ်စပ်တွေမှာပါထွက်ပြီး ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ကြရတဲ့ အဆင့်ထိကို လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အသင်းကြီးဆိုရင် ရိုင်းသွားမလား၊ ဒါပေမဲ့ အဲလိုဖြစ်အောင် လုပ်နေတော့လဲ ဒီလိုပဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ နေ့မွေးညကြီးပါတီပေ့ါဗျာ။
တချိန်ကဆိုရင် သန်းရွှေ က ဆိုက်ဝါး ၊ မ.ဆ.လရဲ့ ဆိုဒ်ဝါးဌာနမှူးကြီး လုပ်လာသူဆိုတော့ ပြည်သူတွေကို အတော်လေး အထင်အမြင်သေးတဲ့ အခံက သူ့မှာ အတော်လေး ကြီးကြီမားမား ရှိနေပါတယ်။ ငါက ဆိုဒ်ဝါးဆရာကြီး ဒီပြည်သူတွေကို ငါထင်တိုင်း လိမ်လို့ရတယ်၊ ညာလို့ရတယ်ဆိုပြီး သူက ဒီလိုဘဲမြင်ထားတယ်။ ဒီစိတ်အခံက ကြီးမားလွန်းတော့ သူ့လက်အောက်က ဗိုလ်ချုပ်တွေကို မောင်အေးကအစ ပါးစပ်တောင် ဟခွင့်ပေးမထားပါဘူး။ တပ်ထိပ်ပိုင်းက ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဒါကို မငြင်းရဲပါဘူး။ ဒါ ဒီအဖွဲ့ကြီးရဲ့ အဆိုးဆုံး ပြည်သူအပေါ်ထားတဲ့ အမြင်နဲ့ သဘောထားတွေပါ။
အဓိက တာဝန်ရှိသူအား နံမည်ပေးကင်းပွန်းတပ်ခြင်း
ကနေ့ အကြပ်ကိုင်ခွံ့ကျွေးရေးပါတီကို သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘယ်လိုဘဲ နံမည်လှအောင် ပေးထား ပေးထား၊ ကျနော်တို့နဲ့ ပြည်သူလူထုကြီးက ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ မြည်းဖူးပြီးပြီမို့ သူတို့ရဲ့ သရုပ်မှန်အတိုင်း ကျနော်တို့ မြေသြဇာအဖွဲ့က လူထုတရပ်လုံးကိုယ်စား သရုပ်မှန်အတိုင်း နံမည်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ပြည်သူတွေက အရှိကို အရှိအတိုင်း မြင်ရဲသူ၊ သတ္တိရှိသူတိုင်း ကျနော်တို့ ပေးထားတဲ့ နံမည်နဲ့ ၇ှုမြင်ကြပါ.. ခေါ်ဆိုကြပါလို့ တင်ပြပါတယ်။ သန်းရွှေ နာယက လုပ်ပြီး သိန်းစိန် ဥက္ကဌ အဖြစ် ဦးစီးပြီး ဖွဲ့ထားတဲ့ ပါတီကို ပြည်ထောင်စု အကြပ်ကိုင်ရေးနှင့်ခွံ့ကျွေးရေးပါတီ လို့ အမည်ပြောင်းလဲ ခေါ်ဆိုလိုက်ကြပါစို့။
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေကလဲ သမိုင်းမှာ ဥပမာ… တိုင်းနိုင်ငံသာယာ ၀ပြောလွန်းလို့ ကျေးဇူးတုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ သတိုးဓမ္မရာဇာဘွဲ့ခံ ဘုရင်တပါးကို သာလွန်မင်းတရားကြီး လို့ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပြီးတော့ မင်းဆိုးမင်းညစ် နရသူ ကိုလဲ ကုလားတွေ လာသတ်လို့ သေရသူမို့ ကုလားကျမင်း လို့ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာဟာဖြင့် မြန်မာတို့ရဲ့ အစဉ်အလာပါ။ ဒီလိုဘဲ ကနေ့ အကြပ်ကိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ နာယကကြီး သန်းရွှေလိုဘဲ ကေသရာဇာင်္ခြင်္သေ့မင်း နံမည်တောင် ထည့်ကာ မှည့်ခေါ်ထားပြီး ဗမာ့ရာဇ၀င်မှာ စည်းစိမ်အမူးယစ်ဆုံး ကမ်းကုန်အောင် တကိုယ်ကောင်းအဆန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မင်းဆိုးမင်းညစ်။ တရုပ်တပ်တွေကို ဒူးတုန်အောင် ကြောက်ပြီး ပြေးခဲ့လို့ နံမည်လှလှလေး ယူထားတဲ့ နရသီဟပတေ့ ကို ပြည်သူတွေကလဲ တရုပ်ပြေးမင်း တဲ့။ ကနေ့ သန်းရွှေဟာလဲ တကိုယ်ကောင်းဆန်တာ လွန်ကဲတဲ့နေရာမှာတော့ အထူးပြောပြစရာတောင် လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ သူ့အာဏာ တည်မြဲရေးအတွက် တရုတ်အစိုးရက ကုလသမဂ္ဂမှာ ဗီတိုအာဏာ နဲ့ အကာအကွယ် ပေးအောင်.... တတိုင်းတပြည်လုံးကို တရုတ်ကို ထိုးကျွေးထားသူမို့ ကျနော်တို့ မြေသြဇာအဖွဲ့ကတော့ အရှိကို အရှိအတိုင်း သန်းရွှေကို တယုတ်ကျွေးမင်း လို့ ကဗျည်းကင်မွန်းတပ်ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ ။
ဒီနေ့ ပုဂံမှာဆိုရင် စာချိုးလေး တခု ရှိပါတယ်။ စာချိုးလေးက ( အနုမှာ . အာန္နဒါ...။ ဥာဏ်တော်....သဗိညု ။ ထု....ဓမ္မရံ...နရသူ..ငရဲခံ ) လို့တောင် ပြည်သူတွေက အဲဒီ မင်းဆိုးမင်းညစ်ကို ငရဲပြည် ပို့ထားလိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါ ကျနော်တို့ ချိုးထားတဲ့ စာအချိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ပုဂံသူ ပုဂံသားတွေ ချိုးထားတဲ့စာပါ။ သန်းရွှေတို့က ကြိုးစား ဖုံးဖိနေတဲ့ စာချိုးလေးပါ ။ ပြည်သူတွေက အဲဒီလောက်တောင် ရွံကြ မုန်းကြတာပါ။ သန်းရွှေ ကတော့ နရသူထက်ကို ဆိုးရွားသူ ဆိုတော့ … ?
ကနေ့ အကြပ်ကိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဖွဲ့ခွင့်ဘဲ ပေးသေးတယ်။ ငါတို့ ပါတီက လက်ရှိ ဓါးမြကြီး သိန်းစိန် ဦးဆောင်ထားတာဆိုပြီး ဘယ်ပါတီမှ စည်းရုံးရေး ဆင်းခွင့် မပေးသေးတာ၊ သူတို့က ဗြောင်စည်းရုံးရေး ဆင်းရုံတင်မက သူတို့ပါတီထဲဝင်ရင် မှတ်ပုံတင် နေ့ချင်းလုပ်ပေးနေတာ။ သူတို့ပါတီထဲဝင်ရင် နိုင်ငံတော်က အတိုးနှုန်းထက် ချိုသာတဲ့နှုန်းနဲ့ ငွေချေးပေးတာတွေ လုပ်နေပါတယ်။
ဒါဟာ ဘာကိုပြသလဲဆိုတော့ နိုင်ငံရေးစည်း ( ထုပ်စည်းထိုးရင် တားထားတဲ့ စည်းလိုမျိုးပေါ့ ) ကို ခိုးကျော်ပြနေတာ။ ကျော်ပြနေတာမှ ဗြောင်ကျကျ လူပါးဝ ကျော်ပြနေတာပါ။ အမှန်တော့ ငါတို့က ဥပဒေလဲ ခိုးမှာဘဲ၊ ထုံးထမ်းစဉ်လာလဲ ခိုးမှာဘဲ၊ ငါတို့က ခိုးရဲတယ် ဘယ်ပါတီ၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း၊ ဘယ်ပြည်သူကို ဂရုစိုက်ရမှာလဲ ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ လုပ်ပြနေတာပါဘဲ။ ဒါဟာ..ဘာကိုပြသလဲဆိုရင် သန်းရွှေ ပါးစပ်က တဖွဖွ ပြောနေတဲ့ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီး ဆိုပြီး ပြောနေတဲ့သူ ကိုယ်တိုင်က ကိုယ်ချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကို ကိုယ်တိုင်ပြန်ချိုးဖေါက်ပြနေတော့ စည်းကမ်းပြည့်မပြည့်တော့မသိဘူး။ သူတို့ မိန်းမတွေ ဦးစီးပြီး ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးရေးရာဆိုတာ ပေါ်လာမှပဲ ပြည့်တန်ဆာခန်းတွေ ၊ မာ့ဆက် ခန်းတွေဆိုတာ လက်ညိုးထိုးမလွဲတော့ဘူးဆိုတာလည်း အားလုံးအသိပါပဲ။ အဲဒိတော့ အဲဒီလို လူတွေ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကြံ့ဖွတ်ပါတီမျိုးဟာ ပြည်သူတွေကို ပြည့်တန်ဆာ စိတ်ဓါတ် မွေးခိုင်းနေတာ ဟုတ်မဟုတ် အသေအချာ ပြန်သုံးသပ်ကြပါ။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် မြေသြဇာတို့ လာ ရှစ်ခိုးတောင်းပန်ပါ့မယ်။
ဒီထက်ပိုဆိုးတာက... အခုလိုပြည်သူတွေကို မွဲပြာကျပြီး စိတ်ဓါတ်အောက်တန်းကျအောင် လုပ်ထားနိင်လေ တနည်းအားဖြင့် ပြည်သူတွေ ငတ်နေလေ ရွေးကောက်ပွဲ တိုင်းမှာ ဒီလိုငွေလေးနဲနဲခင်းပေးပြီး နိုင်အောင်လုပ်မယ်လို့ သူတို့စီမံချက် ချထားပြီးဖြစ်နေလို့ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေက ကွက်ကျော်မြင်ကြစေချင်ပါတယ်။ ငွေလေး မသထာရေစာ ထုတ်ချေးပေးတာကိုဘဲ..မောင်မင်းကြီးသားတို့ပါတီက ကျေးဇူးကြီးမားလှပါပေတယ် ဆိုတဲ့ပုံစံ ဖြစ်အောင်/မြင်အောင် လုပ်လိုက်တာပါဘဲ။
တကယ်ပြည်သူတွေအပေါ် စေတနာထားတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ပါတီဥက္ကဌကြီးလို ၀င်ငွေ ရနိင်တဲ့ အလုပ်မျိုးတည်ဆောက်ပေးပါ့မယ်၊ ကတိတွေပေးပါလား ။ ကနေ့ ပြည်သူတွေ ငတ်ပြီး ကျပ်တည်းနေရတာ ဘယ်သူတွေအုပ်ချုပ်လို့လဲ ဆိုတာလဲ ရဲရဲကြီး ၀န်ခံရဲပါသလား မောင်မင်းကြီးသား အကြပ်ကိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တို့….
တကယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ အမိမြန်မာပြည်ကြီးဟာ ဘယ်သူ့ဆီကမှ ငွေချေးနေစရာ မလိုအောင် နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်ထဲကနေ ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ သန်းရွှေဟာ..သူ့အာဏာ တည်မြဲရေးအတွက်ဘဲ။ တချိန်လုံးတွေး… သူ့ မြေးတွေ နောင်လုံခြုံရေးဘဲ။ တွေးနေတဲ့သူဆိုတော့ နိုင်ငံတော်ဘက်ဂျက်တွေ ထွက်ရှိတဲ့ သယံဇာတတွေကိုလည်း ထင်သလို သုံးစွဲနေတာကို တွေ့ရှိကြမှာပါ။ ကနေ့ ဧရာဝတီတိုင်းဟာ ကျန် ကမ္ဘာ့ပထ၀ီ အနေအထားနဲ့ လုံးဝ မတူတဲ့နေရာပါ။ ဧရာဝတီတိုင်း ဒီရေကနေ ဒီရေလျှပ်စစ်ဓါတ်အား၊ သူတို့ ပြောပြောနေတဲ့ (မီဂါဝပ်) အား သိန်းနဲ့ချီ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး တတိုင်းတပြည်လုံးကို လျှပ်စစ် အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်း.လျှပ်စစ်..( ဥပမာ ..မီတာယူနစ် ၁၀၀-၁၅၀) လောက် ဖရီးပေးနိင်တယ်လို့ မြေသြဇာတို့ လေ့လာထားတာ ရှိပါတယ်။
ဒီပါတီဟာ ဒီလို မစို့မပို့ငွေလေးကို ပိုကြီးကြီး မြင်အောင်ပေးပြီး ပြည်သူတွေ ပိုကျပ်တည်းနေဖို့ လိုတယ်လို့ ခံယူထားသူတွေဖြစ်တယ်။ အကြပ်ကိုင်ပါတီကြီးက ဒီလို ဆက်လက်စည်းရုံးမယ်ဆိုရင် ကျုပ်တို့ ပြည်သူတွေ ကြွယ်ဝလာအောင် လုပ်ပေးမလား.. မစို့မပို့ ငွေလေးထုတ်ချေးပြီး မယားငယ်လို ထားမလားဆိုတာ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက တွေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ် ။
ကနေ့ သန်းရွှေက စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက မူမမှန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့....ပြီးတော့ နရသီဟပတေ့လိုဘဲ ခြင်္သေ့တံဆိပ်ကြီး ယူသုံးပြီး နရသီဟပတေ့ စေါက်ကျင့်နဲ့ တပုံစံထဲ ချိုးပြနေတဲ့ ကြံ့ဖွတ်ပါတီကြိးကိုလဲ..ကျနော်တို့ မြေသြဇာပေးလိုက်တဲ့..အကြပ်ကိုင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ခေါ်မလား....ကြံ့ဖွတ်ဘဲ ဆက်ခေါ်မလား.. တခြား ပိုသင့်လျှော်မဲ့ နံမည်ဘဲ ထပ်ပေးကြမလား၊ သင့်လျှော်တဲ့ အမည်နာမပေးပြီး ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ဖို့ လိုနေပါပြီ။
ကနေ့ ငွေလေး မစို့မပို့ ချေးပေးပြီး..ပါတီထပ်ဝင်ခိုင်းတာကို ဘယ်လိုမြင်ကြပါသလဲ။ ငွေပေးပြီး ပြည်သူတွေကို ဒူးထောက်ခိုင်းတာဟာ ကျုပ်တို့ဆီက မတရားညစ်ယူထားတဲ့ငွေနဲ့ ကျုပ်တို့ ပြည်သူတွေကို ဒဲ့ဒိုး ( ရိုင်းရိုင်း ) ပြောရရင် ဒါဟာ..ပြည့်တန်ဆာစိတ်ဓါတ် ရိုက်သွင်းနေတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေပေးပြီး လိုတာခိုင်းလို့ ရစေတဲ့ စိတ်ဓါတ်ဟာ ပြည့်တန်ဆာတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဘဲ။ အဲဒါ အကြပ်ကိုင်ပါတီဝင်တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဘဲ။ ကိုယ်ငွေနဲ့ ကိုယ့်ကို တဖက်လှည့် လည်ပင်းကြိုးကွင်းတပ်နေတာဆိုတာကို လူထုတရပ်လုံးက သိထားကြဖို့လိုပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ဇူလိုင် (၁၃) ရက်နေ့ နောက်ဆုံး မိန့်ခွန်းထဲက ဗိုလ်ချုပ်စကားကို ယူသုံးရရင် ( ယခင်အစိုးရ လက်ထက်တုံးက လာတ်စားတဲ့ သူတွေရှိတယ်။ အဲဒီလို လာတ်စားတဲ့ သူတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ရန်သူ နံပါတ်တစ် ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို တိုင်းပြည်ရဲ့ နံပါတ်တစ် ရန်သူကို ရိုးရိုးသားသားဖြစ်စေ၊ မရိုးမသားဖြစ်စေ (ဒါကတော့ အကြပ်ကိုင်လို့ မယားငယ်လို အခွင့်အရေးပေးလို့ဖြစ်ဖြစ်) မဲပေးခဲ့ရင် ခင်ဗျားတို့ ကိုယ့်လည်ပင်းကို ကြိုးကွင်းစွပ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်)
အဲဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလေသံနဲ့ လူထုတရပ်လုံးအတွက် စတေးခံ အကောင်းဆုံး မြေသြဇာအဖွဲ့ကနေ ကနေ့ ပြတ်ပြတ်သားသား တတိုင်းတပြည်လုံး သိအောင် ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
( ကနေ့အကြပ်ကိုင်ခွံ့ကျွေးရေးပါတီ ဟာ အကြပ်ကိုင်ပြိး ပြည်သူတွေကို ပြည့်တန်ဆာ စိတ်ဓါတ်ရိုက်သွင်းနေတာကို....ဘယ်လိုပင်..နိင်ငံရေးပြေလည်မှု ရသွားပါစေ.....ခင်ဗျားတို့ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကို ဘယ်လိုအစိုးရဘဲတက်တက် ဘယ်လိုပင် သင်ပုန်းချေတာလုပ်လုပ် ကျနော်တို့ လူထုတရပ်လုံးအတွက် စတေးခံ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာ အဖွဲ့က နံပါတ်တစ် တရားခံလို့ သတ်မှတ်ပေးဖို့ နောက်တက်လာမဲ့ အစိုးရကို တရားစွဲဆိုခွင့်ပေးဖို့ ခု စာနဲ့အတူ တောင်းဆိုလိုပါတယ်)။
အကြပ်ကိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းက တာဝန်ရှိသူတွေကိုလဲ ဒီလို ခင်ဗျားတို့တည်ထောင်ထားတဲ့ အဖွဲ့ကြီးဟာ ပြည်သူတွေ ငွေလေးနည်းနည်းလေးပေးတာကို ဒူးထောက်ကြရတာ ကျုပ် အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့် ဖြစ်ရတာပါလို့အရင်ဝန်ခံခိုင်းရပါမယ်။
အရေးကြီးဆုံးနဲ့ လူထုအတွက်ပါဆိုတဲ့သူတွေ အတွက်ကတော့ လာပါပြီ
ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်ပါတီတွေကိုလဲ ခင်ဗျားတို့လက်ထက်မှာ ပြည်သူတွေ အခုလိုမစို့မပို့ ငွေလေးချေးတာကို ဒူးမထောက်ရအောင် ပြည်သူတွေ ငွေကြေး (၀င်ငွေကောင်းတဲ့) အလုပ်စီမံချက်တွေ ချပြပေးကြပါလို့ တခါထဲ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ တပွဲထိုး ငွေချေးတာမဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်အလုပ်နဲ့ လူတန်းစေ့ ၀င်ငွေ ရစေမဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဘယ်လို ဖေါ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကို ပြည်သူတွေကို ချပြပေးပါ။ လမ်းဖေါက်တံတားဆောက်တာ လာမရွီးကြပါနဲ့။ ဒါ အစိုးရတိုင်းရဲ့ အလုပ်ပါ။
အေးငါတို့ကို နိုင်အောင်မဲထည့်တဲ့ ဒေသအရပ်ကိုမှ လမ်းဖေါက်ပေးမယ် ပြောလာရင် အဲဒါ စိတ်ဓါတ် အလွန်ယုတ်မာတဲ့သူရဲ့ အတွင်းစိတ်ဆိုတာကို သိထားကြပါ။ အဲဒါ ဘိန်းရာဇာ ဖါခေါင်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဆိုတာ မြင်ယောင်လိုက်ကြပါလို့ လူထုတရပ်လုံးအတွက် စတေးခံ မြေသြဇာအဖွဲက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထောက်ပြလိုပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကနေ့ အကြပ်ကိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကြီးကို သတိပေးလိုပါတယ်။ ကနေ့ ခင်ဗျားတို့ လုပ်နေတာတွေဟာ ဖါခေါင်းအတွေးအမြင်..ဖါခေါင်းလုပ်ရပ်၊ တနပ်စားဥာဏ်တွေ ဆိုတာရယ် ဖါခေါင်းအကြံဥာဏ်တွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်ကြပါ။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ပါတီ ကြီးပွား ကြီးထွားလာလေလေ တိုင်းပြည်မွဲသွားလေလေပါလား ဆိုတာ ပြန်စဉ်းစား ကြပါအုံးလို့ ထပ်မံသတိပေးရင်း... ကနေ့ လုပ်နေတဲ့ ဖါခေါင်းအကြံဥာဏ် ဖါခေါင်းစီမံချက်တွေကို ရပ်တန်းကရပ်ပါ။ မဟုတ်ရင် နာမယ်ဆိုတာကို.. ပြတ်ပြတ်သားသား သတိ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီစာကို အဆုံးသတ်ရရင်တော့ ဒီစာဟာ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးအနေနဲ့ ဖတ်သင့်သလို၊ အကြပ်ကိုင်ခွံ့ကျွေးရေး ပါတီအနေနဲ့ သေချာစဉ်းစားပြီး ကိုယ့်သေတွင်းကို တူးထားသင့်သလို ပြည်သူလူထုအတွက်ပါ တိုင်းပြည်တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ လုပ်နေတာပါဆိုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ ပါတီတွေအနေအတွက်လည်း အလွန် အရှက်အကြောက်ကို ပေါ်လွင်စေမဲ့စာ တစောင်ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီစာရေးနေတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အကြပ်ကိုင်ခွံ့ကျွေးရေး ပါတီရဲ့ လမ်းဖေါက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ကို လှမ်းကြည့်နေရင်း…
will allow you to sendaletter to ASEAN Foreign Ministers to support the release of all prisoners of conscience and to promote the three freedoms -- of expression,association and assembly -- in Myanmar/Burma. It is an action generated by Amnesty International Australia but which is being taken up by Amnesty's global movement. It will take onlyaminute to sign the letter.
Please ensure that as many as possible sign the letter. Pass the link around﻿.
ဘဘဦးတင်ဦးနှင့် ဘဘဦးဝင်းတင်ဦးဆောင် ၍ တာမွေမြို့နယ် NLD အဖွဲ့ဝင်များထဲမှ အကျဉ်းကျနေသော ပါတီဝင်များ၏ မိသားစုများကို တွေ့ဆုံအားပေး..
အားလုံးကိုစိန်ခေါ်လိုက်ရင် ကျုပ်တို့ဦးမှ ဖြစ်တော့မယ်
နောက်ဆုံးမှာစိန်ခေါ်ပွဲဘဲဖြစ်သည်။ သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက ကုလသမဂ္ဂနှင့် ပူးပေါင်းခြင်းမပြုခြင်းသမျှ စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ေ၇ွးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်မပြုနိုင်ဟုစိန်ခေါ်လိုက်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရွေးကောက်ပွဲရက်ကို မကြေညာသေးပါလား ဆိုပြီးစိန်ခေါ်လိုက်သည်။ ယနေ့တွင် နိုင်ဝင်ဘာလ ရ ရက်နေ့၌ ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်မည်ဟု စစ်အစိုးရကကြေညာလိုက်ပြီ။ သည်တော့စိန်ခေါ်ပွဲကိုကြည့်ကြဖို့ဘဲရှိတော့သည်။ ရှေးဦးစွာစိန်ခေါ်ပွဲသည် သဘာဝကျပါရဲ့လားဆိုပြီး တွေးကြည့်ဖို့လိုသည်။ မည်သူတွေကောင်းစားရေးအတွက် စိန်ခေါ်ပွဲနည်း။ နိုင်ငံတကာသည် မြန်မာပြည်သူတို့အတွက် နအဖစစ်အစိုးရကို စိန်ခေါ်ထားသည် ။
ဤအချက်ကို မြန်မာပြည်သူတုိ့ နားလည်ပါသလား။ ခံစားတတ်ပါသလား။ နလဘိန်းတုံးများဖြစ်နေသောသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးနှင့်ကင်းကွာနေပါသည်ဟုပြောခံနေရသောပြည်သူများရှိပါသလား။ ယင်းပြည်သူများကို နိုင်ငံရေးပါးဝပါသည်ဟု ဆိုသော ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့်ပါတီများက ပြောဆိုရန်မသင့်ပေဘူးလား။ ဦးအေးလွင်က ပြည်သူတွေမှာ နိုင်ငံရေးနှင့် ကင်းကွာနေ၍ အကြောက်တရားတွေ ၀င်နေကြသည်ဟုပြောဆိုထားပါသည်။ သည်မျှလောက်နိုင်ငံရေးခန့်မှန်းမိသူဖြစ်လျင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်မှပင် အသိအမှတ်မပြုပါဟု ကြေညာထားသော ရွေးကောက်ပွဲကို ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များက ဤကိစ္စကိုခန့်မှန်းရကြမည်ထင်သည်။ နလဘိန်းများကို ပြောဆိုနိုင်ကြမည်ထင်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးနှင့် ကင်းကွာနေသောပြည်သူများကို ရှင်းပြရဲသော သတ္တိများရှိနေကြဖို့လိုပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ စိန်ခေါ်ထားလိုက်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံကောင်းစားရေးအတွက်ဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်ကို ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီများက ကျနော်တို့ထက် ပို၍နားလည်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရွေးကောက်ပွဲရက်ကို မကြေညာခြင်းနှင့် စပ်လှဉ်း၍ပြောဆိုလိုက်ခြင်းမှာ ၂၀၁၀ နှစ်၏အချိန်ကာလကို တွက်ချက်၍ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုနိုဝင်ဘာ ရ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်ဆိုလာသည်။ သည်တော့အချိန်ကာလကို တွက်ချက်ကြည့်က ၃ လ ပင်မရှိတော့။ ယင်းကြားထဲစည်းရုံးရေးမဆင်းရသေး။ကိုယ်စားလှယ်များတောင်မရှိသေး။ ပါတီရုံးမရှိသေး။ ပါတီသဘောထားများ ကြေညာချက်မရှိသေး။ပါတီဖွဲ့စည်းပုံတွေ မရှိသေး။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည်ပြောနှင့်နေကြသောပါတီများမှာ အလွန်အောက်ကျနောက်ကျ နိုင်လွန်းလှပါသည်။ စစ်အစိုးရ၏ပြုသမျခံနေရပါသည်။ ကြံ့ဖွဲ့ပါတီကိုပင် မျက်စောင်းထိုး၍ မကြည့်ဝံ့စရာဖြစ်နေရပါသည်။ စကားကြီးစကားကြယ် နိုင်ငံရေးစကားပြောဖို့ လွပ်လွပ်ခွင့် တရားမျှတခွင့်တို့မှာ သူတို့နှင့် လားလားမျှမဆိုင်။ ကြေညာစတမ်းသဘောထားထုတ်ရုံမျှနှင့် ပါတီဖျက်သိမ်းခံရနိုင်သည်ဟု ရခိုင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကို ပြည်နယ်ရွေးကော်ပွဲကော်မရှင်ကခြိမ်းခြောက်လိုက်သောသတင်းကိုကြားရပြီ။ တခြားပါတီများကိုလည်း သိစေအောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည့်သဘော။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့က စောစောစီးစီးရွှေညောင်ပင်က လမ်းခွဲလိုက်ပြီ။ မကြာမှီလမ်းခွဲမည့် ပါတီများထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်။ သဘောက သူတို့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ဘောင်က ဘာမှမရှိသည်ကို အောင့်အီးသည်းညဉ်းမခံနိုင်သည့်အဆုံး ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့အနေနှင့် မ၀င်ရောက်တော့ဟု ကြေညာကြတော့မည်အလားအလာ ရှိလာနိုင်သည်။ ကျွန်တော်ထင်သည်။ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတိကြီးမှာ တပါတီမျှမရှိသေးချေ။ သူတို့လိုငွေအင်အားမတောင့်တင်းကြောင်း ၀န်ခံနေကြပြီ။ စည်းရုံးရေးဆင်း၍မရကြောင်း ညီညူနေကြပြီ။ ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်လည်း ပြိုင်ပြီးယှဉ်ပြိုင်၍လည်းရမည်မဟုတ်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တိုင်းရင်းသားနယ်မြေမှာ သူတို့လူမျိုးပါတီကိုဘဲ ဦးစားပေးကြမည်ဖြစ်သည်။ ရှေးဦးစွာကြံ့ဖွံ့နှင့် တစညပါတီတို့နှင့်ယှဉ်ပြိုင်၍နိုင်မည်ဟု မထင်ထားလျင် ရွေးကောက်ပွဲကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ၀င်ရောက်ရန်မသင့်။ ယခုလည်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄၄၀ နေရာမှာ ပြည်သူတွေက ၃၃၀ နေရာရွေးချယ်ပြီး စစ်တပ်က ၁၁၀ ရွေးချယ်ပြီးသားရှိမေမည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၂၂၄ နေရာမှာ ၁၆၈ နေ၇ာကို ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီး ၅၆ ယောက်က ကာကွယ်ရေးစစ်ဦးချုပ်က ရွေးချယ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုရလျှင် တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အများဆုံး ၁၀ ဦးခန့်ရွေးချယ်ခံရသည်ထားဦး။ ရ၀ ဦးသားရွေးချယ်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်သော ၂၅၀ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှာ ကြံ့ဖွံ့နှင့် တစည ပါတီမှဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၃၀ ထဲတွင် အတိုက်အခံပါတီများမှ ၁၀၀ ခန့်ပင်အနိုင်ရရှိမည်မဟုတ်။ သည်တော့ စစ်တပ်က ၁၁၀ ဦးရေနှင့် ပေါင်းလိုက်လျင် နေရာ ၄၄၀ တွင် စစ်အစိုးရက သူတို့ပါတီနှင့် သူတို့ကိုယ်စားလှယ်အတွက် နေရာရှိပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့မှာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဖြစ်သော အတိုက်အခံကောင်းများရှိကြပါသည်။ စုစည်း၍မရကြသောကြောင့် အတွေးအခေါ်မတူညီကြခြင်းကြောင့် ပြန့်ကြဲနေကြခြင်းသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ယခုလိုနအဖစစ်အစိုးရ၏အချိုးကျ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာကို တွက်ချက်ကြည့်ပြီး ကျန်သောနေရာများအတွက် မိမိတို့ အတိုက်အခံများဘက်က တွက်ချက်ကြည့်လျင် ရွေးကောက်ပွဲမှာ လုံးဝမ၀င်သင့်ကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းများသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြှို်မည့်သူထဲတွင် တွေ့မြင်နေကြပါသည် ။ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာရှည်ကြာပြီး နေလာခဲ့သော နိုင်ငံရေးသမားကြီးတို့မှာ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကို ခုအချိန်ထိ ခါးတောင်းကျိုက်ပြီး တွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြဆဲဖြစ်သည်ကို တွေ့မြင်နေရပါသည်။ တုပ်တုပ်မျှမလှူပ်ရဲသောနိုင်ငံရေးကစားကွက်တွင် ဒီမိုကရေစီအောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့အရေး နိုင်ငံရေးသမားကြီးတို့က စစ်တုရင်ကစားနေကြသည်မှာ အင်အားချိန်ခွင်လျှာမညီဘဲဖြစ်နေပါသည်။ အကယ်၍ယခုလိုချိန်ခွင်လျှာညီမည့်အချိန်မှာ စစ်အစိုးရ၏ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်မယှဉ်ပြိုင်တော့ပါဟု ကြေညာလိုက်သည်ဆိုလျင် စစ်အစိုးရသည် မည်သည့်နည်းနှင့်မျ ရွေးကောက်ပွဲကို
ဆိုကြပါစို့။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မိမိတို့ရှုံးမည်ပွဲ၌ မပါဝင်ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံရေးလာကမှ ထွက်ခွါသွားရလိမ့်မည်လည်းမဟုတ်ချေ။ ယင်းမှာနိုင်ငံရေးကစားကွက်ပုံဖေါ်ခြင်းတခုသာဖြစ်သည်။ နအဖဖစစ်အစိုးရသည် စိန်ခေါ်လိုက်သည်ဆိုသော်လည်း သူတို့မှာ အနာဒဏ်ရာမရှိမဟုတ်။ နောက်ကြောမှာထိုးထားသောဒဏ်ရာက နာကျင်နေသည့်ကြားမှ စိန်ခေါ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍စစ်အစိုးရပုံဖေါ်ခြင်းကို လိုက်မည်လားဆိုသော ပြသနာကို စဉ်းစားရန်လိုပြီ။ တချိန်တည်းမှာပင် မိမိတို့နိုင်ငံရေးပုံသဏ္ဍန်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်သင့်ရန်လည်းလိုသည်။ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် အာဏာပြသနာဖြစ်သည်။ မိမိတို့ပြောချင်ဆိုချင်သော ပြသနာမှာ အာဏာပြသနာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အာဏာတစက်မျှမရရှိသော ယင်းပုံစံခွက်ကို ပြုပြင်နေစရာလည်းမလို။ ပုံစံခွက်တခုကို မိမိတို့ဘာသာ ဖန်တီးရန်လိုသည်။ ဤနေရာ၌ ပြည်တွင်းပြည်ပပြသနာတွေရှိနေသည်။ ပြည်ပအနေအထားသည် ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်မပြုဟုဆိုထားနှင့်ပြီ။ ပြည်တွင်းမှမူ သာမန်ပြည်သူတွေက ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမပေးရေးကို ပြောဆိုနေကြပြီ။ စစ်တပ်ထဲတွင်မူ နှစ်ခြမ်းကွဲနေပြီ။ ရဲမွန်တပ်ရင်းသည် နေပြည်တော်အမိန့်အာဏာဟူသမျှကို လက်မခံတော့ ။ သူတို့၏မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် သေနတ်တပြင်ပြင်ရှိနေပြီ။ ငတ်ပြတ်နေသောသူတို့၏မိသားစုများအတွက် ရဲမွတ်တပ်ရင်းမှ ရဲဘော်များသည် နေပြည်တော်မှလာသော အမိန့်ကို မနာခံတော့။ တသွေးတသံတမိန့်ဟု နာမည်ကြီးနေသော နအဖတပ်မတော်သည် ယခုပြိုကွဲနေပြီဖြစ်သည်။ ခလရ ၂၂ မှာလည်း ထွက်ပြေးသူထွက်ပြေးနှင့် တပ်ပြေးတွများနေကြပြီ။ တပ်မတော်ပြိုကွဲမှ နိုင်ငံရေးရာသီပြောင်းလဲသွားမည့် လက္ခဏာရှိနေပြီ။ ဤအချက်သည်
နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သော အချက်များဖြစ်နေသည်။
ကျွန်တော်တို့မှာ နိုင်ငံရေးအခြေနေပြောင်းလဲနိုင်သော နည်းလမ်းများရှိနေပါသည်။ ယင်းမှာပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအခြအနေတင်းကြပ်လာမူများရှိနေခြင်း။ တပ်မတော်အတွင်းပြိုကွဲလာပြီး အမိန့်မနာခံမူများရှိနေခြင်း။ နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်မပြုခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်း။ အပစ်အခတ်ရပ် ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်များပြသနာတက်လာခြင်း စသည်တို့မှာနိုင်ငံရေးရာသီများကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ပြည်သူတွေက ဒိမိုကရေစီသူရဲကောင်းများကို လိုချင်နေကြပါပြီ။ တိုင်းပြည်ကယ်တင်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရှာဖွေနေကြ တမ်းတနေကြပါပြီ။ နိုဝင်ဘာလ ရ ရက်နေ့မတိုင်ခင် ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းများကို ပြည်သူတွေ မြင်ချင်တွေ့ချင်နေကြပါပြီ။ ပြည်သူတွေကြားဖြတ်အစိုးရတခုကို ဖွဲ့ချင်နေမြင်ချင်နေကြပါပြီ။ ယင်းကြားဖြတ်အစိုးရထဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါနေစရာလည်းမလိုချေ။ အကြောင်းမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နိုင်ငံရေးအရ ညစ်ပတ်မသွားအောင် ကြားဖြတ်အစိုးရနှင့် ခပ်ကင်းကင်းထားရန်အရေးကြီးနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ တခုခုပြောကြဆိုကြဖို့ မသင့်ပေဘူးလား။ စစ်အစိုးရ၏နိုဝင်ဘာလ ရ ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲကို အကောင်းဆုံးဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သောနည်းမှာ ကုလသမဂ္ဂနှင့် ပြည်သူတွေက ပူးပေါင်းရေးသာဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါလား။ သည်တော့ စိန်ခေါ်လာလို့ကတော့ ကိုယ်ကဦးမှ ဖြစ်မည်ကိုစဉ်းစားဖို့သာလိုနေပါတော့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲရက် ကြေညာပေမဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအခ...
This link http://3freedoms.amnesty.org/about.html...